Shiinaha 5mm 100% Aluminium silig Aluminium Warshad, Soo-saareyaasha Iyo CE - Tiknoolajiyadda Sifeynta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > N95 silig sanka > 5mm 100% silig sanka Aluminium ah
55 gal PUR dhalaalaya badan
Filter Kuuriya94 silig sanka ah
5mm 100% Aluminium xarig silig ah
3mm silig hal sanle oo muhiim ah
5mm 100% silig sanka Aluminium ah
Our 5mm 100% silig Aluminium Aluminium ah waxaa soo saaray duub. Marka la barbardhigo hal sanka aluminium, waxaa si otomaatig ah loo soo saari karaa sida silig sanka lagu dhex dhisay, awoodda waxsoosaarkuna waa ku dhowaad saddex jeer ka sarreysa. 5mm 100% siligga sanka Aluminium ayaa soo maray baaritaanka SGS iyo CPST, si ballaaran ayaa loo isticmaalaa ku jirta N95 waji
Our 5mm 100% silig Aluminium aluminium ah ayaa la soo saaray. Marka la barbardhigo hal sanka aluminium, waxaa si otomaatig ah loo soo saari karaa silig sanka lagu dhex dhisay, awoodda waxsoosaarkuna waa ku dhowaad saddex laab. maaskaro
Hordhaca wax soo saarka ee 5mm 100% silig sanka Aluminium ah
1.Ourkeena 5mm 100% silig aluminium aluminium ah sifeyn la'aan iyo qaabeynta saameynta. Waa laaban karaa 10 jeer oo si iskiis ah ayaa loo furi karaa. Markaad lumiso xoog dibedda ah, waxay ka ilaalin kartaa qaabka soo noqoshada.
2.The 5mm 100% silig aluminium aluminium waxaa soo saaray duub. Marka loo barbardhigo hal sanka aluminium aluminium ah, waa la soo saari karaa si otomaatig ah, iyo awoodda wax soo saarku waa ku dhowaad saddex jeer ka sarreeya.
2.ProductParameter (Specification) ee 5mm 100% siligga Aluminium
Muuqaalka Wax soo Saarka Iyo Codsiga 5mm 100% siligga sanka Aluminium
Our 5mm 100% silig aluminium aluminium ah wuxuu leeyahay qaab siman, oo aan lahayn guntin iyo ductility wanaagsan. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa N95 waji xidho.
Faahfaahinta wax soo saarka ee 5mm 100% siligga sanka Aluminium
Shahaadada Wax soo saarka ee5mm 100% silig sanka Aluminium ah
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba5mm 100% silig sanka Aluminium ah
Waxaan ku siin doonaa 7 * 24 saacadood adeeg-raac iyo taageero farsamo ah markaad iibsaneyso 5mm 100% sanka aluminium ee shirkadeena, si aadan walwal uga qabin iibka kadib.
1.Q: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?
J: Waxaan soo saari karnaa 10 tan oo san ah maalintii.
2.Q: xaqiijin noocee ah ayuu sankaaga bar ku dhaafay?
J: xariijimaha buundada sanka ayaa ka gudbay SGS, shahaadada CPST, ilaalinta deegaanka ROHS, gaarto sun aan sun ahayn, isku laab laabashada iyo tijaabooyinka kale ee la xiriira, waxaana loo dhoofiyay Kuuriyada Koonfureed, Spain iyo dalal kale.
3.Q: waa maxay waxyaabaha ufiican sanka sanka ee maaskaro?
J: waxaa jira alaabta ceeriin ee 'PET', 'PE' iyo 'PP' loogu talagalay buundada sanka ee maaskarada. Soosaarayaasha kaladuwan waxay sameeyaan agab kaladuwan Midda guud waa polypropylene hydrocarbon resin (PP). Nooca noocan oo kale ah iyo silig birta ah ayaa foorara isla markaana qaabeela ficilka xoogga dibadda, kaas oo sii wadi kara waxqabadka wanaagsan ee jira.
4.Q: sidee buufiska sanka u xumaadaa si uu ugu soo celiyo mas'uuliyad?
J: cilad-darrada buundada sanka waxaa keenay xakamaynta heerkulka aan habboonayn ee habka wax soo saarka.Macaaladda ay soo saarto shirkaddayda hal xarig oo sanka isku xidha ah ayaa loo rogi karaa 360 digrii, wixii qalloociyana ma beddelayso qallafsanaanta.
5.Q: N95 maaskaro sanka aluminium ama sanka laba geesoodka ah?
J: sanka aluminiumku wuxuu leeyahay firfircooni iyo qaabeyn, laakiin qiimaha ayaa ka sarreeya. Haddii aan si wanaagsan wax looga qaban, Cape May waxay dhaawacdaa qaybta sanka; saameynta qaabeynta ee sanka laba jibbaaran ee sanka ayaa waxoogaa ka xun, laakiin kharashku wuu ka hooseeyaa waana ka ammaan badan yahay.
4mm silig laba geesle sanka ah
5mm silig laba geesle sanka ah
4mm 100% silig sanka PP
5mm 100% silig sanka PP ah